Gantaallo oo loo riday dhanka Tel Aviv ka dib markii dhismihii munaaradda Gaza la dumiyey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Gantaallo oo loo riday dhanka Tel Aviv ka dib markii dhismihii munaaradda...
Ururka Xamaas ayaa sheegay inay 130 gantaal ku soo rideen dhanka Israa’iil ka dib markii munaarad ay deganaayeen oo ku taal Qaza ay soo duntay kadib duqeyn ay diyaaradaha Israa’iil ka geysteen.
Qiiq ka baxaya duqeyn cirka ah oo ay Israa’iil ka fulisay munaaradda Hanadi ee magaalada Qaza [Mohammed Abed / AFP]
11 Meey 2021
Ururka Xamaas ayaa sheegay inay in ka badan 100 gantaal ku garaaceen magaalada Tel Aviv ee Israa’iil kadib markii duqeyn dhanka cirka ah oo ay Israa’iil geysatay ay burburisay daar weyn oo ku taal marinka Gaza ee go’doonsan.
Taawarka oo ka koobnaa 13 dabaq oo ku yaalay Magaalada Gaza ayaa dumay kadib markii duqeymaha cirka ee Israel ay la beegsadeen dhismaha Talaadadii. Ma jiraan wax war ah oo ku saabsan qasaaraha soo gaaray dadka deegaanka, kuwaa oo la sheegay in ay faarujiyeen Taawarka Hanadi kahor inta uusan ku dhicin
‘Xaaladda faraha ka baxday’: Carruur badan ayaa ku dhimatay weerarada Israa’iilArab League waxay cambaareyneysaa duqeymaha cirka ee Israa’iil ay ka wado GazaSheikh Jarrah dadka degan ayaa ka hadlaya cayrinta qasabka ah ee Israel.
Muuqaalo fiidiyoow ah ayaa muujiyay saddex qiiq oo qaro weyn oo ka soo baxaya munaaradda, dabaqyadiisa sare weli wey hagaagsan yihiin illaa uu ku soo dhacay dhulka. Munaaraddu waxay leedahay xafiis ay adeegsadaan hoggaanka siyaasadeed ee Xamaas, oo xukuma Qaza.
Waxyar kadib duqeynta, Xamaas waxay sheegtay inay tobanaan gantaalo ah kusoo riday dhanka Tel Aviv.
Sirenka iyo qaraxyada ayaa laga maqlay magaalada, oo ku taal meel qiyaastii 45 mayl (70 kiiloomitir) waqooyiga ka xigta Gaza.
Hay’adda garoomada diyaaradaha ee Israel ayaa sheegtay inay joojisay duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv “si loogu oggolaado difaaca cirka qaranka”.
“Hadda waxaan fulinaynaa ballanqaadkeenna,” ayuu yiri garabka hubaysan ee Xamaas. “Guutooyinka Qassam waxay bilaabeen gantaalkii ugu weynaa ee ay ku garaacaan Tel Aviv iyo hareeraheeda, iyagoo adeegsanaya 130 gantaal, taasoo jawaab u ah bartilmaameedka cadawga ee ku wajahan munaaradaha la degan yahay.”
Ugu yaraan 31 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen tan iyo markii ay sii xoogeysatay colaadda u dhaxeysa Israa’iil iyo Xamaas Isniintii. Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in 28 qof ay ku dhinteen duqeymaha diyaaradaha Israel ka geysteen dhulka xeebta ah. Dhakhaatiirta Israel ayaa sheegay in sadex qof ay ku dhinteen weerarada gantaalada.
Dagaalkan u dhexeeya Israa’iil iyo kooxaha hubaysan ee Qaza ayaa imanaya kadib markii ciidamada Israa’iil ay weerareen xarunta masaajidka Al-Aqsa maalintii Isniinta maalintii seddexaad oo isku xigta, iyagoo ridaya rasaas bir ka samaysan caag, bambooyin naxdin leh iyo sunta dadka ka ilmeysiisa ee Falastiiniyiinta ku cibaadeysanaya goobta saddexaad ee ugu qiimaha badan Islaamka. maalmaha bisha barakaysan ee Ramadaan.
Xiisadda ayaa sidoo kale cirka isku shareertay xukun maxkamadeed oo hadda dib loo dhigay oo la xiriira ka saarista qoysas dhowr ah oo Falastiiniyiin ah guryahoodii, oo ay sheegteen deganayaasha Israa’iil, xaafadda la haysto ee Bariga Qudus ee Sheekh Jarrah.
Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas wuxuu ku booriyay dhammaan dhinacyada inay dib u noqdaan, waxayna xusuusisay shuruudaha sharciga caalamiga ah ee ah in la isku dayo in laga fogaado waxyeelada rayidka.
Raiisel wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay inuu xoojin doono xoojinta iyo inta jeer ee weerarada lagu qaadayo Gaza, oo ah dhul ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof, si looga jawaabo weerarada gantaalada.
Israa’iil waxay sheegtay inay u dirtay 80 diyaaradood inay duqeeyaan Qaza, waxayna u dirtay lugta iyo gaashaan si ay u xoojiso taangiyada horay loogu soo ururiyay xadka.
Madaxa Xamaas ayaa sheegay in kooxdu ay “diyaar tahay” haddii Israa’iil ay kordhiso rabshadaha.
Ismaciil Haniyeh, oo ah hogaamiyaha Xamaas oo hada ku nool banaanka diyuurada, ayaa yiri “Hadaan (Israel) doonayno inay kordho, diyaar ayaan u nahay, hadii ay rabto inay joojiso, anaguba diyaar ayaan nahay,”.
Previous articleAmiirka Qatar oo booqday Sacuudi Carabiya sanado kadib qilaaf u dhaxeeyay labada dal.
Next articleIsraa’iil oo xaalad deg deg ah gelisay magaalada bartamaha dhacda ee Lod kadib markii dibadbaxyo rabshado wata ay halkaas ka bilawden
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in la sii wado wadahdalada la xiriira doorashooyinka,...